China 30ml iglasi isiqholo iglasi isiqhumiso mveliso kunye nabenzi | Comi
Iibhotile zokuthambisa zeglasi ezenziwe ngeglasi ngeSitayile esitshiziweyo
Inombolo Inombolo: I-KMPB30-002
Ibhotile yeglasi ecoliweyo ecoliweyo ilungile kuluhlu lolwelo lweziqholo zekhaya. Iibhotile ezomeleleyo eziveliswa ngeglasi eshinyeneyo, ezivumela ukuba ibhotile iphinde isetyenziswe. Sineendidi ezininzi zeebhotile ezicoliweyo zeglasi
Sinqwenela ukwenza ukuba iprojekthi yakho entsha yokupakisha isebenze ngokufanelekileyo ngesisombululo esifanelekileyo.
Iglasi yeprimiyamu ecacileyo.
Ilungele iziqholo kunye neziqholo zasekhaya.
Zuza ekusebenzisaneni nenkampani ehambisa amaxesha akhokelayo kwimarike. Sinikezela ngeenkonzo zoyilo ezingenakuthelekiswa nanto kunye namandla emveliso kwinqanaba lehlabathi.
ICOMI AROMA- Umenzi wobuchule kwiibhotile zeglasi zeziqholo.
I-KMPB30-002 30ml 33mm Imilimitha engama-97 105g
Izinto zebhotile  Iglasi yeFlint ephezulu
Egqithileyo 100ml engenanto ecacileyo isitshizi yeglasi ibhotile
Okulandelayo: Ibhotile yeglasi eneglasi eyi-50ml
15ml Ihowuliseyili izithambiso Perfume Packaging Mini ...
Sprayer Glass Bottle 10ml Bottle Lesiciko ...
100ml engenanto ecacileyo isitshizi yeglasi ibhotile